यी हुन् सर्वाधिक सुखद् यौन जीवन भएका १० देश, अस्ट्रेलिया भारतभन्दा पछाडि - Eall Nepal
जानकारी रोचक विश्व समाचार
१. स्वीटजरल्याण्ड अध्ययनअनुसार स्वीटजरल्याण्डका मानिसहरु सबैभन्दा बढी यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछन् । अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार स्वीसहरु आफ्नो यौन जीवन उत्कृष्ठ रहेको मान्दछन् । ३२ प्रतिशतले त सार्वजनिक स्थानमा नै यौन सम्पर्क राखेको बताएका छन् । स्वीटरजरल्याण्डमा वैद्य वेश्यालय प्रसिद्धी, नर्सरीदेखि सुरु हुने विवादित यौन शिक्षा कार्यक्रमका कारण यहाँ मानिसहरु सर्वाधिक यौन सन्तुष्टी प्राप्त गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
२.स्पेन स्पेनमा करिब १० हजार मानिसमा गरिएको अध्ययनमा सहभागि मध्ये ९० प्रतिशत मानिसले यौनसन्तुष्टि प्राप्त गरेको स्बताएका छन् । यो संगै स्पेन यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने देशको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा उभिएको छ । अध्ययनमा सहभागिहरुले स्थाई यौनसाथीसँग सन्तुष्टिको मात्रा बढ्ने गरेको पनि बताएका छन् । न्युड बीच, तेस्रो लिङ्गीको विवाह मान्यता, पुरुषहरुको आकर्षक ब्यक्तित्व रहेको मानिन्छन् । यी विविध कारणले स्पेनका एक चौथाइ मानिस यौन जीवन उत्कृष्ट मान्छन् ।
३.इटली खाना र वाइनका लागि प्रख्यात देश इटली, यौन सन्तुष्टिको मामिलामा पनि अग्र स्थानमा नै देखिएको छ । प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार इटलीमा सेक्स खानाको टेबलबाट सुरु हुन्छ, जस्तो कि खाना र सेक्सको कुनै सम्बन्ध रहेको होस् । दिनमा दुई ग्लास वाइन पिउने महिलाहरु यौन सम्बन्धमा बढी सुखी हुने गरेको जनाइएको छ । ६४ प्रतिशत इटालीयनले आफ्नो यौन जीवन सन्तुष्ट रहेको जनाएका छन् ।
४.ब्राजिल ल्याटिन अमेरिकी मुलुक ब्राजिल सर्वाधिक यौन सन्तुष्टिको भएका देशहरुको सूचीमा चौथो नम्बरमा सूचीकृत हुन सफल भएको छ । विभिन्न अध्ययनले ८२ प्रतिशत ब्राजिलियनहरु हप्ताको एकपटक यौन सम्पर्क गर्ने तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । ब्राजिलियनकै यौन ब्यवहारसँग सम्बन्धित अर्को प्रतिवेदनले भने उनीहरु हप्ताको तीन पटक सेक्स गर्ने गरेको देखाएको थियो । ब्राजिलका पुरुषहरु स्पेनपछि दोस्रो आकर्षक पुरुषमा परेका छन् । ब्राजिलियनहरु अन्य देशका तुलनामा चाडै कुमारित्व गुमाउन गर्छन । अध्ययनमा ब्राजिलियहरु सेक्स सम्बन्ध कायम गर्ने विषयमा पनि सर्वाधिक सिपालु मानिन्छन् ।
५.ग्रीस डामाडोल अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा नउकासिएको भएपनि ग्रीसका मानिसहरु यौन सन्तुष्टिको मामिलिामा भने अगाडि देखिएका छन् । ग्रीसको यौन ब्यवहार सन्तुष्टिजनक हुनुमा यहाँको शदियौं देखिको यौन खुलापनलाई पनि लिन सकिन्छ । आज पनि मानिसहरु कामको सिलसिलामा, साथीभाईसँग यौनका बारेमा खुलेर कुरा गर्ने गर्दछन् । उनीहरु सेक्स पार्टनरसँग पनि खुलेर कुरा गर्छन । जसले उनीहरुको यौन जीवन सुखद बनाएको छ । मौसम, सुन्दर टापु र स्वस्थ खानपिन पनि यिनीहरुको यौन सन्तुष्टी बढी हुनुको प्रमुख कारण हो । अध्ययनका अनुसार ग्रीसका मानिस हप्ताको १६४ पटक सेक्स गर्छन् भने उनीहरुमध्ये ५१ प्रतिशतले सन्तुष्टि रहेको जवाफ दिएका छन् ।
६.नेदरल्याण्ड डच राष्ट्र नेदरल्याण्ड यौन खुलापनका क्षेत्रमा विश्वमा निकै अगाडि मानिन्छ । फेमस रेडलाइट एरिया, गुणस्तरीय सेक्स शैलीलगायतका कारण उनीहरुको सेक्स जीवन सखुद् मानिएको छ । नेदरल्याण्डमा ६४ प्रतिशत पुरुष वा महिला सेक्सको समय आफ्नो आवश्यक्तालाई राम्रो सँग बुझ्दछन् । होल्याण्डका २२ प्रतिशत मानिस आफ्नो यौन जीवनलाई उत्कृष्ठ ठान्दछन् ।
७.मेक्सिको कुनै समय मेक्सिको सबैभन्दा कामुक देशमा गनिन्थ्यो भने धेरै यौन सन्तुष्टि हुने देशको सूचीमा दोस्रो स्थानमा पर्दथ्यो । जहाँ ६३ प्रतिशत जोडी यौन जीवन बिताएको दाबी गर्दथे । यसका पछाडि यौन शिक्षाका बारेमा सरकारले खेलेको भुमिकालाई प्रमुख मानिन्छ । सन् २००८ मा मेक्सिकोका हाइस्कुलमा करिब ७ लाख यौन शिक्षा सम्बन्धी किताबहरु वितरण गरिएको थियो । जसमा जन्म नियन्त्रण, गर्भपतन र समलिङ्गी यौन बारेमा समावेश गरिएको थियो ।
८.भारत दक्षिण एसियाली मुलुक भारत यौन सन्तुष्टि सर्वाधिक हुने मुलुकहरुको सूचीमा आठौं स्थानमा पर्दछ । यौनका बारेमा समाज त्यति नखुलेपनि ढिलो उमेरमा कुमारित्व गुमाउनुको कारण हुन सक्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा भारत चरम यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने मुलुकहरुको सूचीमा आठौं स्थानमा सुचिकृत छ । भारतीयहरुले औसत २२ वर्षको उमेरमा कुमारित्व गुमाउने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । भारतीयहरुको सम्पर्क स्थापित गर्ने भन्दा पनि लामो सम्बन्ध स्थापित गर्ने सोंचका कारण यौन जीवन सन्तुष्ट हुने गरेको पाइएको छ । बन्द समाज र पूर्वीय दर्शनमा आधारित यहाँ यौन जीवन रहस्यले भरिएका कारण पनि सन्तुष्ट रहेको मानिएको छ । बेडरुमा एकदमै छिनो सहवास सक्काउने भारतीयहरु अगाडि छन् । उनीहरु औसत यौन क्रियाको समय १३ मिनेटको रहेको छ । ६१ प्रतिशत भारतीयहरु आफ्नो यौन जीवन सन्तुष्ट रहेको दाबी गरेका छन् ।
९.अस्ट्रेलिया ओसियाना मुलुक अष्ट्रेलिया भारतभन्दा एक स्थान पछाडि रहेपनि अमेरिका भन्दा बढी नै यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने मुलुकमा पर्दछ । ७५ प्रतिशत अस्ट्रेलियनहरु गाडीमै सेक्स गर्न रुचाउँछन् भने । सवारी साधनले उनीहरुको कामुकतालाई ह्वातै बढाइदिएको मान्न सकिन्छ । २७ प्रतिशत अस्ट्रेलियन महिलाहरुले आफ्नो सेक्स लाइफका बारेमा कुनै पनि कुरा परिवर्तन गर्न चाहदैनन् । अस्ट्रेलियन महिलाहरु आफ्नो यौन जीवनलाई फेन्टासी मान्छन् । जुन अमेरिकामा ४ प्रतिशतमा मात्र यस्तो देखिने गरेको छ ।
१०.नाइजेरिया अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाका ६७ प्रतिशत मानिस यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने बताइएको छ । सबैभन्दा लामो समय, लगातार २४ मिनेटको सम्पर्क राख्ने यौन ब्यवहारका कारण पनि सन्तुष्टिको मात्रा बढी भएको हुन सक्ने बताइएको छ ।
Die Finanzagentur Weiss Ratings taktlos den Vereinigten Staaten hat der die beste Kryptowährungs-Zuverlässigkeitsbewertung aufgestellt. Der beste Platz ist nicht vonseiten…
Vape Pen -aBrief Introduction Who Else Wants to Learn About Vape Pen? Ultimately, among the most essential affairs…
Buttonless Vape Pen - the Conspiracy It really is always astute to obtainavaping thing that has warranty. Most…
Un-Answered Issues With Thc Oil Vape Pen Disclosed What You Don't Know About Thc Oil Vape Pen It will be…
Who Else Is Lying to Us About Vape Pen? Vape Pen - the Conspiracy Because the used grounds stay in…